Airbus A319 Jet fiaramanidina Interior Private Jet Satan'ny Flight
Airbus A319 Jet fiaramanidina Interior Private Jet Charter Flight Service for raharaham-barotra na minitra farany takatry ny fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina manokana Rental Company akaiky ahy noho ny manaraka Travel toerana tamin'ny tapaky ny habeny deadhead mpanamory tongotra foana notsongaina ao amin'ny faritra misy anao.
Ny Airbus ACJ319 Aerospace Private Jet Sata dia kilasy afera fiaramanidina. Ny endrika dia mifototra amin'ny ara-barotra ny A320 AN'HABAKABAKA. Ny fiaramanidina dia nampidirina tao 1997 ary ahitana solika fanampiny fiara mifono vy noho ny tany am-boalohany A319. Midika izany ny fiaramanidina dia afaka mandeha lavitra intsony ny 6000 nm na 6,905 kilaometatra. Izany dia matetika niasa ny Sata orinasa sy ny orinasa lehibe noho ny raharaham-barotra mahavariana isan-karazany ny kilasy endri-javatra.
Service hafa Manolora isika raha ny amin'ny rivotra sambo Fitaterana Service akaiky anao.
Ny afovoan- ACJ319 dia malalaka sy Ultra-maoderina, dia toy izany no manao izany tsara noho ny raharaham-barotra nitatitra VIPs amin'ny fitsangatsanganana. Ny fiaramanidina tonga amin'ny fizarana maro, izay hanampy mpandeha haka aina ao amin'ny tompony ensuite efitrano fatoriana amin'ny efitra fandroana, mijery horonan-tsary ao amin'ny faritra fandraisam-bahiny, mitarika fivoriana na hankafy sakafo eo amin'ny faritra fisakafoana. Tsy mirehareha ny lehibe indrindra-efitra hazo fijaliana fizarana amin'ny kilasy ary manome lafo vidy tsy manam-paharoa. Ny Sata manome fiaramanidina iraisana amin'ny fanjakana cockpit-of-the-kanto endri-javatra.
Dia tanteraka ny interiors customizable ny fepetra takiana hifanaraka efitra manokana. Izany dia faritra maromaro izay ahitana mpiasa sy mampiasa manidina-by-tariby fanaraha-maso.
Fiaramanidina Airbus A319 liana amin'ny subregion
Ny Airbus ACJ319 Jet Aircraft Review
Tsy Tsy mahagaga fa ny Airbus ACJ319 dia iray amin'ireo fiaramanidina malaza indrindra ao amin'ny ACJ family. Izany dia manome ny tsara indrindra isan-karazany mitambatra, rendrarendra sy ny efitra malalaka. Afaka mandeha avy any Cape Town any Afrika Atsimo any Dubai na avy any Las Vegas ho any Londres tsy misy fa ilaina ny refuel. Izany dia manome tena ilaina manovaova ny mpitantana nirotsaka amin'ny raharaham-barotra fitsangatsanganana amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Ny fiaramanidina maneho ny tarehy sy ampy fitaovana tsara ho be atao birao manidina mpandraharaha. Izany dia zava-dehibe raharaha fitaovana izay mendrika ny ambony-profil satan'ny sy ny laza ny orinasa lehibe sy ny filoham-pirenena.
Ny fiaramanidina no handraisana hatramin'ny 50 mpandeha. Izany ihany koa dia manolotra safidy ho fanahafana fanampiny mitovy ny zavatra ilain'ny mpandraharaha. Ny ACJ319 manana ny fahafahana manidina haingana kokoa amin'ny avo, dia toy izany no fampihenana ny fotoana sidina.
Airbus A319 Jet fiaramanidina Luxury Atitany Private Jet Charter Flight Service #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury # AirbusA319Jetairliner # airbusa319 # airbusa319seating # airbusindustriea319 # a319airbus #Luxuries #lifestyle #travel
Lahatsoratra iray nozarain'i WysLuxury JetCharter (@wysluxury) amin'ny Oct 11, 2017 amin'ny 8:09pm PDT
The World's Biggest, haingana indrindra, Priciest Private Jet
Private Jet Air Satan'ny Flight Anchorage, Fairbanks, Juneau, Near Me AK